शनिबार को दिन यी काम कहिल्यै नगर्नुहोस – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/शनिबार को दिन यी काम कहिल्यै नगर्नुहोस
काठमाडौँ- शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिबार शनिदेबको दिन भएकाले आज शनिदेवका विरोधी काम गर्न रामे मानिदैन् । आज शनिदेबलाई प्रसन्न गर्ने काम गनूपर्छ । जस्त ैशनिलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ ।ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसकोे कुण्डलीमा शनिदोष हुन्छ उनीहरुले शनिदेवको पूजा गर्न जरुरी छ ।
दहि किन्न निस्केकी २२ वर्षीय युवती माथि काठमाडौंमा ए’सि’ड प्र’हा’र
आमाको शृंगार हेर्दै नक्कल गर्थे, मेकअप आर्टिस्ट भए
छिमेकीको बच्चाले साग बारी कुल्चेछ, खुट्टा भाँचेर पठाइदिने?: माग्ने बूढा.
दुर्गेश फेरि विवादमा आउने पक्का, ६ वर्ष पुरानो गीतसग मिल्यो हुबहु शब्द (भिडियो सहित)